बैंकहरुले फेरि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरे : अब कुनमा कति ब्याजदर पाइने?(सम्पूर्ण जानकारी सहीत) – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १२:१२ Basanta Khanal	0 Comments	Bank Interest
काठमाडौं : वाणिज्य बैंकहरुले जेठ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नयाँ ब्याजदर सर्वाजनिक गरेका छन् । वैशाखको तुलनामा बैंकहरुले ब्याजदरमा सामान्य हेरफेर गरेका छन् । केही बैंकको मात्रै कर्जाको ब्याजदर बढेको छ भने अधिकांशको ब्याजदर यथावत नै रहेको छ । बैंकको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा खासै ठूलो परिवर्तन भएको छैन । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको निक्षेप र कर्जाको नयाँ ब्याजदर हेरौं :
एनआइसी एसिया बैंक: एनआइसी एसिया बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले बचतमा १.५२% ब्याजदर दिने जनाएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार मुद्दति निक्षेपमा ६.५२% सम्म ब्याज पाइनेछ । चैत मसान्तसम्मको आधार दर ६.७७% छ । यसमा ७% सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जनाएको छ । स्थिर कर्जाको लागि बैंकले १२.७७% ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
नेपाल एसबीआई बैंक : नेपाल एसबीआई बैंकले बचतको ब्याज २.५५% तोकेको छ भने व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ७.५०% निर्धारण गरेको छ । यता, बैंकको चैत मसान्तसम्मको बेस रेट ७.४६% छ । यसमा न्यूनतम १.५०% देखि अधिकतम ५% सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुने बैंकले जानकारी दिएको छ ।
नबिल बैंक: नबिल बैंकले बचतमा न्यूनतम १.५१% देखि अधिकतम ३.५१% सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिमा अधिकतम ६.५१% ब्याज दिने भनेको छ । यो एक वर्षभन्दा बढी समयको मुद्दतिको ब्याजदर हो । ३ महिनाको मुद्दतिको ब्याजदर ५.०१% निर्धारण गरेको छ । यता, बैंकको चैत मसान्तसम्म बेस रेट ६.१८% छ । यसमा ७% सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जनाएको छ । स्थिर ब्याजमा घर कर्जाको लागि बैंकले न्यूनतम ८.४९% देखि ११.५०% सम्म ब्याजदरमा कर्जा दिने बताएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरेर बचतको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ५.५०% देखि ७.२५% र संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ५% देखि ६.५०% सम्म ब्याजदर हुनेछ । त्यसैगरी, बैंकले बचत खातातर्फ न्यूनतम ३% देखि ५% सम्म ब्याजदर तोकेको छ । यस बैंकले असार महिनाको आधार दर ५.८% अनुसार कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक: सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर २.७५% र अधिकतम ४.७५% राखेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याजदर ७.७५% कायम गरेको छ । यो एक वर्षभन्दा माथिको मुद्दतिको ब्याजदर हो । यता, बैंकको चैत मसान्तसम्मको आधार दर ७.७७% रहेको छ । यसमा ६% सम्म प्रिमियम थप गरेर विभिन्न कर्जा दिइने बैंकको भनाई छ । स्थिर कर्जाको लागि ११.४९% देखि १२.९९% ब्याज दर निर्धारण गरेको बैंकले जानकारी दिएको छ ।
एनएमबि बैंक : एनएमबि बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर २% र अधिकतम ४% तोकेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ७% र न्यूनतम ५% निर्धारण गरेको छ । चैत मसान्तसम्मको अधारदर ७.१९% रहेको छ । यसमा अधिकतम ५% सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाई छ ।
एभरेष्ट बैंक: एभरेष्ट बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर २% देखि अधिकतम ४% सम्म तोकेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याजदर ८.२५% र न्यूनतम ४.७५% तोकेको छ । चैत मसान्तसम्म बैंकको आधार दर ६.१०% छ । यसमा अधिकतम ५% सम्म प्रिमियम थप गरेर बैंकले कर्जा दिन्छ ।
हिमालयन बैंक : हिमालयन बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर २% र अधिकतम ४% तोकेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको न्यूनतम ब्याजदर ४% र अधिकतक ब्याजदर ७% निर्धारण गरेको छ । बैंकको चैत मसान्तसम्मको अधारदर ६.७५% रहेको छ । यसमा अधिकतम ५% सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाई छ ।
माछापुच्छ्रे बैंक : माछापुच्छ्रे बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज २% देखि अधिकतम ४% सम्म निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको ब्याज ७% निर्धारण गरेको छ । चैत मसान्तसम्म बैंकको आधारदर ७.०९% छ । यसमा बैंकले ७% सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा दिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले स्थिर ब्याजदरको लागि न्यूनतम ९.८९% देखि अधिकतम १२.२४% ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
मेगा बैंक : मेगा बैंकले बचतको न्यूनतम २.७५% देखि अधिकतम ३.५०% सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ७.२५% निर्धारण गरेको छ । चैत मसान्तसम्म बैंकको आधार दर ७.५९% छ । यसमा अधिकतम ५% सम्म प्रिमियम थप गरेर ऋण प्रवाह गर्ने मेगाको भनाई छ ।सनराइज बैंक : सनराइज बैंकले बचतमा न्यूनतम २% देखि अधिकतम ३.५०% सम्म ब्याज दिने भएको छ । यता, मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ७% ब्याज निर्धारण गरेको छ । चैत मसान्तसम्मको बैंकको आधार दर ७.२३% रहेको छ । यसमा ६% सम्म प्रिमियम थप गरेर बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने जनाएको छ । बैंकले स्थिर ब्याजदरको लागि न्यूनतम १०.५०% देखि अधिकतम १३.५०% सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
लक्ष्मी बैंक : लक्ष्मी बैंकले बचत खातामा न्यूनतम २.५% देखि अधिकतम ४.५% सम्म ब्याजदर तोकेको छ । मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ३ महिनाका लागि ७% र एक वर्ष माथि ७.५% सम्म ब्याजदर दिन्छ । बैंकको चैतसम्मको आधार दर ६.७९% छ । यसमा ५% सम्म प्रिमियम थप गरेर बैंकले कर्जा दिन्छ ।
प्रभु बैंक: प्रभु बैंकले बचत खातामा न्यूनतम २% देखि अधिकतम ४% सम्म ब्याजदर तोकेको छ । मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ न्यनतम ५.५०% र अधिकतम ७% सम्म ब्याजदर दिन्छ । बैंकको चैतसम्मको आधार दर ७.०६% छ । यसमा ५% सम्म प्रिमियम थप गरेर बैंकले कर्जा दिन्छ । स्थिर ब्याजदरको लागि न्यनतम ९.९९% देखि अधिकतम ११.९९% सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
कुमारी बैंक : कुमारी बैंकले बचत खातामा न्यूनतम १.७५% देखि अधिकतम ३.७५% ब्याजदर तोकेको छ । बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ५.५०% देखि ६.५०% सम्म ब्याजदर तोकेको छ । त्यसैगरी कर्जातर्फ विभिन्न प्रकारको लोनमा आधार दरमा अधिकतम ७% सम्म प्रिमियम तोकेको छ । बैंकको चैत महिनामा आधार दर ७.६३% छ । बैंकले न्यूनतम १०.५०% देखि अधिकतम ११% सम्ममा स्थिर कर्जा दिने जनाएको छ ।
सिद्धार्थ बैंक : सिद्धार्थ बैंकले जेठ महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले बचतमा न्यूनतम २% देखि अधिकतम ४% सम्म ब्याजदर दिने उल्लेख गरेको छ । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ न्यूनतम ६.५% देखि अधिकतम ७% सम्म ब्याजदर दिने भएको छ । यता, यसको चैत महिनामा आधार दर ६.९९% छ । बैंकले विभिन्न प्रकारका ऋण दिँदा आधार दरमा ५% सम्म प्रिमियम थप गर्ने जनाएको छ । स्थिर ब्याजदरको लागि बैंकले न्यूनतम ८.४९% देखि अधिकतम १०.९९% सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
कृषि विकास बैंक : कृषि विकास बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर ३.५०% र अधिकतम ५% तोकेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ७.५०% र न्यूनतम ६.५०% निर्धारण गरेको छ । चैत मसान्तसम्मको अधारदर ७.४८% रहेको छ । यसमा अधिकतम ५% सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाई छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंक:प्राइम कमर्सियल बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर २.७६% र अधिकतम ४.५०% तोकेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ७.५०% र न्यूनतम ७.७६% निर्धारण गरेको छ । चैत मसान्तसम्मको अधारदर ७.१४% रहेको छ । यसमा अधिकतम ६.९९% सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाई छ । स्थिर कर्जाका लागि बैंकले न्यूनतम १०% देखि अधिकतम ११% सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
एनसीसी बैंक:एनसीसी बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर २.५०% र अधिकतम ५% तोकेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ८% र न्यूनतम ७% निर्धारण गरेको छ । चैत मसान्तसम्मको अधारदर ७.४१% रहेको छ । यसमा अधिकतम ५% सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाई छ । स्थिर कर्जाका लागि बैंकले न्यूनतम ९.२५% देखि अधिकतम ११% सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
बैंक आफ काठमान्डू : बैंक आफ काठमान्डूले बचतको न्यूनतम ब्याज २.५०% र अधिकतम ४% राखेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ७% कायम गरेको छ । यो एक वर्षभन्दा माथिको मुद्दतिको ब्याजदर हो । यता, बैंकको चैत मसान्तसम्मको आधार दर ७.६०% रहेको छ । यसमा ५% सम्म प्रिमियम थप गरेर विभिन्न कर्जा बैंकले दिइने बैंकको भनाई छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंक : नेपाल बंगलादेश बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर २.७५% र अधिकतम ४% तोकेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ७.७५% र न्यूनतम ७.२५% निर्धारण गरेको छ । बैंकको चैत मसान्तसम्मको आधारदर ९.८९% छ । यसमा अधिकतम ५% सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने बैंकले जनाएको छ । स्थिर कर्जाका लागि बैंकले न्यूनतम ९.९९% देखि अधिकतम १२.९९% सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – ०१ जेठ २०७८ शनिवारको राशिफल पढौं
निजामति कर्मचारी (सिभिल) अस्पताल कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण →
मनकामना स्मार्ट र जीवन विकास लघुवित्तको आईपिओ नेप्सेमा सुचिकृत हुदै, कहिले ?
२८ माघ २०७७, बुधबार ११:२४ Basanta Khanal	0